Tiraynta maansada | Heeshi
FG: Waraaqdan oo sannado ka hor ku soo baxday kobgalshaha WardheerNews ayaan hufid ku sameeyay. Daabacaaddii koobaad halkan kala soco.
AFEEF: Bashiirow guntaa laga fantaa, geed haddaad koriye[i] — (Gantaal, 115; Max’d-Daahir Xasan). Waa sida meeriskaasu yeedhshay hannaanka ay warqaddani u qorantahay. Xogta ay xambaarsantahayna waa ay ka gungaadhaysaa. Sida kale, maansadeennu waa bade, yaan loo qaadan in ay warqaddanu wada kulmisay aqoon kasta oo maansada lagu saafto.
Meeris walba oo maanso ah, hal illaa dhawr erey ayaa laga helayaa. Erey kastana waxaa loo falfalliiri karaa alamo (hadduusan hal alan ka koobnayn); alamadana tibxo[ii] (xarfo). Tibxuhu waa kuwa leh shibbanayaal iyo shaqallo. Shaqalladu (inta asteyaashoodu hirgashay) shan dhaadheer iyo shan gaaggaaban ayey kala yihiin. Tibxaha waxaa ka mid ah laba tibxood oo labeebo[iii] ah—asteyaashooduna waa “W” iyo “Y”—oo iyagu marna sida shibbanayaasha u hawlgala (tusaale: wid, wadar, weerar, yur, yulqan, yaambo, iwm.) marna sida shaqallada (tusaale: bawdyo, dow, deyr, dayr iwm.). Labadan tibxood oo u milan sidan, ey, ay, aw, ow, iwm., waxa ay marna u dhaqmaan sida alamo shaqaldheerayaal wata, marna sida alamo shaqallo gaaggaaban wata; waxa ayna kolkaas yihiin dhafanayaal gadaal, dhex iyo horaba kaga dhafan ereyada.[iv]
Marka maanso la miisaamayo, xeerarka habdhiska maansadu waxay ka duulan alamada askuma ereyada.[v] Alamadu, dhisme ahaan, waxa ay u qaybsamaan laba: (1) dhawaaqyo ka dhalan kara tibxo saafi ah oo shaqallo ah (oo gaaban amma dheerba leh) iyo (2) dhawaaqyo ka dhasha tibxo isku-jir ah oo shaqal iyo shibbaneba leh. Marka erey alamo loo kala jajabinayo, waa lagamamaarmaan in dhawaaq kasta goonnidiisa loo sooco, iyada oo tibxaha lammaanaada mar kasta la kala fujinayo, sida ku cad tusahan soo socda:
Tusaha 1aad: Alamaynta Ereyada
aabbe aab/be aabb/e
ayeeyo a/yee/yo ay/eey/o
eebo ee/bo eeb/o
goobataal noqo e goo/ba/taal no/qo e goob/a/taal noq/o e
raysmagaadho rays/ma/gaa/dho ray/sma/gaa/dho
meermeeraysi meer/mee/ray/si meerm/ee/ray/si
sandulle san/dul/le san/dull/e
Sida ku cad tusahaas kore, alamada toosan iyo kuwa (alamo la moodka ah ee) weecsani waa ay is tiro le’egyihiin. Sida ay labadu u kala gedisanyihiinna waa la dhadhansan karaa dhawaaq awaadeed. Balse in aynu kuwa toosan mar kastaba garansan nahay waa lagamamaarmaan, sidaas awgeed, afartan qodob ayaa loo cuskanayaa garashadooda:
b) Erey kasta oo laba-alanle iyo ka badan ah haddii ay laba shibbane ereygan dhexdiisa is xigsadaan waa in labadan shibbane la kala sooraa. Tusaale ahaan: bab/bis, bab/bis/yo, tar/tan, tar/tan/no, iwm.
t) Haddii ay saddex shibbane erey dhexdiisa is xigsadaan waa in labada hore laga sooraa ka saddexaad. Tusaale ahaan: bawd/yo, bayd/gaab, iwm.
j) Erey kasta oo laba-alane iyo ka badan ah oo aan wadannin shibbanayaal is xigsaday waa in soorniinku ku dhacaa shibbane kasta oo dhexda ku jira hortiisa. Tusaale ahaan: baa/buur, moo/ra/duug, iwm.
x) Isku-dhafka saddexdaas qodob. Tusaale ahaan: bab/bis/ya/da, bawd/ya/ha, iwm.
Meeris walba oo maanso ah alamada ku jira si loo kala sooro waxaa loo cuskanayaa afartaas qodob ee kore. Tusaale ahaan:
Cis/maan ya/re ca/ga da/bayl – (8 alan)
hoo/baa/le hoo/baa/la/yow, ho/ba/la/yow hee/dhe – (13 alan)
baar/qab waa see/doo, sa/ri/ba may/nee, sa/gaal jir an ir/maa/nay/neey – (18 alan)
Immika kolkaas waa inoo walalac in alamadu yihiin sarabka meeriska maansada iyo waliba afka oo idil ereyadiisa. Xeerka koowaad ee aragtida BSr. Carraale ee miisaanka maansaduna waxa uu ku giijisanyahay alamada guud ee meeriska (sida kuwa dusha ku cad) oo loo wehel-yeelo alamada wata shaqallada dhaadheer (amma dhafanayaasha dhaadheer). Waxa halkaaasna ka soo baxa inta nudood ee ay xubinta maanso ee la gorfeenayo yeelan karto. Tusaale[vi] ahaan, jiiftadu waxay leedahay shan nudood (sal) oo kala ah:
duufaan ka guurkii (5 alan, 4 ka mid ihi wataan shaqaldheere)
Nuux iyo gadaashii (6 alan, 3 ka mid ihi wataan shaqaldheere)
meeshuu ku kala go’ay (7 alan, 2 ka mid ihi wataan shaqaldheere)
baddi jiidhay gebiyada (8 alan, 1 ka mid ihi wato shaqaldheere)
dhaqammada is geli kara (9 alan, 0 ka mid ihi wato shaqaldheere)
Alamada tusmayntooda ka sokow, marka alamada loo kala qaado alamo wata shaqaldheerayaal iyo alamo wata shaqallo gaaggaaban, waxa tiraynta maansada u sabab ihi waa alamada wata shaqallada dhaadheer kala jajabkooda (waa hadday dhacdo e) iyo raceynta nudda ay ka tirsanyihiin. Nudda labaad, tusaale ahaan, ee maanso kasta waxa ay ka tafiirmataa isla nudda koowaad; nuddan labaadi waxa ay leedahay tiro mid ka dhiman tirada alamada shaqallada dhaadheer leh ee ay nudda koowaadi leedahahay. [Dhugo nudaha 1d iyo 2d ee jiiftada, sida dusha ku cad.] Haddaba, marka aan nuddan labaad dul joogno, inta siyood ee aan u qori karnaa, u ratibi karnaa (raceyn ahaan), meeriska (nudda labaad) waxa aan ku magcaabaynaa tax. Kolkaas wadarta taxaha dhammaan nudaha oo idil ee maanso kasta waxa aynu ku magcawnay tirayn, oo ah aragti-ku-doonka dhammaan meerisyada[vii] ay maanso wada xamili karto. Maansooyinka qaar, sida jiiftada, tirayntooda meeris saleedi waa ay sugantahay, oo aragti-ku-doonkooda iyo inta tusaalayaal ah ee jira, amma maanso hore laga soo xuli karo, waa ay is celiyaan.
Hoosta ka sii akhriso waraaqda (ka sii soco bogga 3d).
Tilmaamayaal: Alan, Carraale, Gaarriye, Gabay, geeraar, heello, Jiifto, Maanso, Meeris, Miisaanka Maansada, Soomaali, Suugaan, Timacadde, xubin maanso
Ged cusub: Sheeko gaaban →